Global Voices Podcast 4: Misandratra Isika Miaraka · Global Voices teny Malagasy
Global Voices Podcast 4: Misandratra Isika Miaraka
Voadika ny 03 Oktobra 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Português, Français, English
Miarahaba an'izao tontolo izao!
Amin'ity andiany ity dia handre ireo mpamaham-bolongana Grika avy ao amin'ny fikambanana Rising Voices ianareo, ny fomba fanatsaran'ny olotsotra tia mampita vaovao Goatemalteka ny talentany hiatrehana ny fifidianana ary izay kasaina hotontosaina mandritra ny Vovonan'ny Mpamaham-Bolongana Arabo hotontosaina ny 3-6 oktobra 2011 any Tonizia ary anisan'ny mpikarakara ny Global Voices.
Olotsotra tia mampita vaovao any Goatemalà
Vozz dia tetikasa fanazarana ny olotsotra tia mampita vaovao izay ianaran'ny tanora anelanelan'ny 16-24 taona any Goatemalà mianatra ny fanaovan-gazety. Kara Andrade avy ao amin'ny Vozz no nitafatafa tamin'ny Tonianay ao amin'ny faritra Amerika Latina Silvia Viñas ny momba ny fanangonam-baovao mandritra ny fifidianana Goatemalteka sy ny fampitetezana fandaharam-panofanana mba hampivelarana ny tambajotran'ny olotsotra mirotsaka an-tsehatra.
Famahanam-bolongan'ny Jamba any Gresy
Taorian'ny fanakatonana sekoly ho an'ny jamba any Tesalonika, Gresy, dia nanapa-kevitra ny hanangana bolongan'ny tarika sy fandaharana fampielezam-peo an'aterineto antsoina hoe Fihaonan'ny Jamba. Ity tetikasa ity dia mahazo fanohanana avy amin'ny tetikasa Rising Voices niara-naorin'i Alexia Kalaitzi. Nifampikarajia tamin'i Alexia momba ny fitaovana ampiasain'ny jamba hamahanam-bolongana izahay sy ny fiantraikan'ny krizy ara-toekarena any Eoropa amin'ny jamba sy ny pahipahina. Isaorana koa ny mpanao rap – Kostas also nihira ho antsika amin'ity andiany ity!
Vovonan'ny mpamaham-bolongana Arabo any Tonizia
Anisan'ny mpikarakara ny vovonan'ny mpamaham-bolongana Arabo iarahana amin'ny Nawaat sy ny Heinrich Boell Foundation izay hotontosaina ny 3-6 oktobra any Tonizia ny Global Voices. Ny mpamaham-bolongana saiky avy amin'ny firenena rehetra no hihaona ka hiresaka momba ny zoto an-tserasera sy ny hoaviny. Taorian'ny fivoriana farany tany Berota tamin'ny 2010, maro ny mpamaham-bolongana no nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fifandraisana nandritra fihetsehana nanerana ny faritra Afovoany Atsinanana. Ny tonian'ny Fandraharahana avy ato aminay Solana Larsen no niresaka tamin'ny talen'ny Global Voices Advocacy [Mpisolovava] Sami Ben Gharbia ny amin'izay norafetina hotontosaina mandritra ny fivoriana any Tonizia.
Ny tenifototra amin'ny fivoriana dia ny #AB11 ary ny vohikala dia ny Arabloggers.com.
Dia izay indray no mamarana ity andiany Global Voices podcast iray ity. Te-handre avy aminareo izahay, ampahafantaro anay izay nankafizinareo na raha misy zavatra manokana tianareo ho fantatra momba ny fikambanana!
Maro ny hira ambany zon'ny Creative Commons amin'ity fandraisampeo ity. Raha misy moa ny mpanakanto tianareo ho fantatra bebe kokoa ny momba azy dia ireto ny rohy mety ilainao. Isaorana ny Orb Gettarr tamin'ny Return of the Atlanteans Lemurian Candidate, i Mark Cotton tamin'ny Spiritualized Homage, i Superbus feat. NS tamin'ny Fujjad! Mivantana avy amin'ny artista ny ankamaroan'ny mozika na hita ao amin'ny OpSound.Org, The Free Music Archive. Isaorana ihany koa ny feo mahafinaritra nandritra ny fandraisampeo sy ny rakikira nampiraikitra antsika niaraka tetoana.